विमान ढिलाे भएपछि मन्त्री योगेश भट्टराईमाथि नेपालगञ्ज विमानस्थलमा गालीगलौज | News Polar
बाँकेः मन्त्रीका कारण विमान उडानमा ढिलाइ भएपछि अाक्राेसित केही युवाले विमानभित्रै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईमाथि नेपालगञ्ज विमानस्थलमा गालीगलौज गरेका छन् । मन्त्रीलाई गाली गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखिएकाे छ ।
सूचनाकाे हकका अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीको टोलीले बुद्ध एयरको विमानभित्र मन्त्री भट्टराईलाई गालीगलाैज गरेकाे भिडियो खिचेर युट्युबमा राखेकाे थियाे । काठमाडौं आउने विमानलाई मन्त्रीले एक घण्टासम्म कुराएर यात्रुलाई सास्ती दिएको शाहीको टोलीकाे अाराेप छ ।
पर्यटन मन्त्री भट्टराई शनिबार डल्फिन महोत्सवको उदघाटन गर्न धनगढी हुँदै बाँके पुगेका थिए । कार्यक्रम सकेपछि शनिबार साँझ उनी नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट बुद्ध एयरमा काठमाडौं फर्किएका छन् ।
कार्यक्रम सकेर नेपालगञ्ज विमानस्थलमा आइपुग्दा विमान छुट्ने समय केही ढिलो भएको थियो । तर, एक घण्टासम्म नभई १५ मिनेटमात्र ढीलो भएको मन्त्री भट्टराईका स्वकीय सचिव प्रेम गुरागाईको दाबी छ ।
विमानभित्र मन्त्री भट्टराईमाथि के भनिएकाे थियाे ?
मन्त्री भट्टराईले मागे क्षमा
मन्त्री भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै आफू विमानस्थलमा आइपुग्न १५ मिनेट ढिलो भएको बताउँदै यसबाट यात्रुमा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमायाचना गरेका छन् ।
मन्त्री भट्टराइले के भने ?
सबै यात्रुको बोर्डिङ भएको करिब १५ मिनेटमा हाम्रो टिमको बोर्डिङ भएको हो । भोलि प्रतिनिधिसभामा माननीयहरुको प्रश्नको मैले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेका कारण काठमाडाैं फर्कनै पर्ने दबावमा म थिएँ । नेपालगञ्ज विमानस्थलमा ३/४ जना व्यक्तिहरु आक्रामक शैलीमा मेराविरुद्ध प्रस्तुत हुनुभयो । एकजनाले पारसका विरुद्ध सात लाख हस्ताक्षर दरबारमा बुझाएर तैंले हामीलाई कति दुःख दिएको छस् ? त्यो हामीले कहाँ बिर्सेंका छौ र ? सम्म भने । त्यो सुनेपछि उनीहरुको नियत मैले बुझिहालें । सम्पूर्ण यात्रु तथा बुद्ध एयरले देखाएको समझदारीप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।’
प्रकाशित : भदौ २८, २०७६, २३:४४:४४